Maxay barnaamijyada xirida ugu xunyihiin batterigaaga? | Wararka IPhone
Maxay barnaamijyada xirida ugu xunyihiin batterigaaga?
Haddii aad badanaa i aqriso, waxaad awoodi doontaa inaad aragto sida in ka badan hal jeer oo aan ka digay in xirida codsiyada aysan ahayn oo kaliya aan loo baahnayn, laakiin sidoo kale ay tahay adeegsi aan macquul ahayn oo wax qabad ah iyo sidaas darteed batari, laakiin weligey si cad ugama aanan sharxin sababta booska Waxaa laga yaabaa in maanta la joogo waqtigii aan caddayn lahaa waxa aan uga jeedo ereyadan. Kuwo badan ayaa leh maaniyadan lagu dhisay caloosha jiritaankooda, waxaan qirayaa inaan ku khasbanaaday inaan ka adkaado waqtigeyga, sidii isticmaale hore ee Android, aniga oo xirnaanshaha codsiyada waxay ahayd arrin waxqabad halkii aan ka dalban lahaa, sii deynta RAM-da wax badan ayaa looga waqtiyadaas oo ah sinjibiil Android ah. Markaas waxaa jira kuwa u maleynaya in sidan ay batari ku keydsadaan iyagoo aan laheyn codsiyo "furan", taas oo gabi ahaanba waalan, illaa ay cadaato mooyee, inaadan haysan qeybta waxqabadka oo sifiican loogu maamulo asalka isla markaana aad ku haysato codsiyo aan loo baahnayn karti.
Farsamadan ayaa ka dhib badan fahamkeeda in la sharxo, waxaan ka ogahay khibrad. Fikradda waa fududahay, waa inaan ka baxnaa caadadan, gaar ahaan haddii aan nahay isticmaaleyaasha iOS, taleefanka horay ayuu noogu sameeyaa. Markaad ka xidheyso codsi hawlo badan, kaliya ma keydinayno batteriga, laakiin si dhakhso leh ayaan u daadinnaa maaddaama Apple ay leedahay nidaam maamul oo wax ku ool ah oo loogu talagalay barnaamijyada macruufka ee aan firfircooneyn, iyo sidoo kale isticmaalka kheyraadka ay barnaamijyadan u baahan yihiin, tusaale tusaale ah waa Spotify, ma soo degsatay liis dheer oo heeso ah si loo helo? offline?, Sidaas awgeed Codsigu wuxuu ku xasuusin doonaa haddii ay tahay xagga dambe ama nasasho inay joojinayso soo dejinta muusigga, waayo? Sababtoo ah macruufka kumbuyuutarka ayaa kuu oggolaan maayo inaad isticmaasho kheyraadkan tirada badan adigoon codsi isticmaalin, waxaa jira tusaale si aan u awoodno arag waxa kaliya ka shaqeeya.
Xaqiiqda ah inay keydineyso xirida batteriga xaqiiqdii waa sheeko xariir oo kaliya maahan sababta aan kuu sheegay, laakiin sidoo kale maxaa yeelay waxay saameyn ku yeelan doontaa waqtiyada rarka ee codsigaas oo aan sida ugu habboon u xirnay, taasi waa, haddii aan si rasmi ah u xirno Twitter, waa inaan dib ugu noqonaa Furitaankeeda si buuxda waxay kordhin doontaa waqtiga lacag bixinta, soo dejinta sawirada, sidaas darteedna isticmaal batteri badan. Marka aan ka baxno codsi adigoo riixaya guriga, dalabku waa la joojiyay, isticmaalka processor-ka kama warqabo arjigaas laakiin waa mid si guud ah, si loo kordhiyo waqtiyada rarka.
Xusuusnow, waa inaad kaliya xirtaa arjiga si joogto ah haddii ay tahay codsi aad u isticmaasho wax aad u yar (oo aan loo baahnayn) ama dalabku si qalad ah ayuu ku socdaa oo waxaan dooneynaa inaan dib u bilowno, laakiin tan waxaan u sameyneynaa sababaha horumarka waxqabadka ma ahan oo keliya aan waxtar lahayn, halkii ay si xun u saamaynayso isaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Maxay barnaamijyada xirida ugu xunyihiin batterigaaga?
Kuma raacsani, maxaa yeelay waxay kuxirantahay nooca iOS. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad sameyso hubinta nolosha batteriga adigoo xiraya oo aan xiri doonin barnaamijyada. Waxaan ku hubiyey macruufka 7 iyo macruufka 8. Iyada oo macruufka ah 7 batteriga ka yaraa waxa lagu cunay barnaamijyadoodii la xidhayey, isla markaana macruufka 8 batteriga ka yaraa waxa lagu cunay iyaga oo furan. Iyadoo macruufka ah weli ma aanan hubin,
Ku jawaab jmblazquezh
Markaa maahan wax badan oo badan? hakiso codsiyada adigoo riixaya badhanka guriga
Waxaa laga yaabaa inuusan badbaadinayn batteriga laakiin wuxuu furayaa xusuusta.
Jawab Daniel Ramos
xiritaanka barnaamijyadu waxay xoreeyaan xusuusta waxayna ka dhigaan taleefanka mid dheecaan badan leh….
Ku jawaab Frank Duran
Waxaan u maleynayaa in sharraxaadu aysan sax ahayn, sidaan qabo. Codsi aad isticmaasho usbuuciiba hal mar (tusaale ahaan), dabcan waad xiri kartaa tanina wax saameyn ah kuma yeelan doonto isticmaalka batteriga gebi ahaanba. Waxaan ku raacsanahay haddii ay tahay mid aan loo baahnayn oo cunaysa ilo badan, xidho oo furo barnaamij aad inta badan isticmaasho (sida WhatsApp). Laakiin dabcan waad xiri kartaa barnaamijyada aad isticmaasho hal mar marwalba sidaas marar badan.
Tani waa meesha iOS uusan laheyn maareyn batteri oo wanaagsan marka ay ilaalineyso nidaamka furan ee barnaamijyada.
iyo hadii ay tahay inay wax ka barato android ka oo aad loo necbaa
IOS-ka, barnaamijyada aad isticmaashay waa furan yihiin, waxayna ka tegayaan Terminalka bilaa Battery-ga si deg deg ah 🙁
Newbie leeekhaz liita
Tani maahan aragti .. Waa xaqiiqo jirta lol
Kuwa aan haysan Jailbreak waxay fahansan yihiin inay caro buuxda noqon karto in codsi aad u badan laga helo qalabka wax lagu beddelo halkaas oo aysan ku jirin RAM (ma furna).
Si kastaba ha noqotee, dadka isticmaala JB waxay leeyihiin tweak loo yaqaan 'Springtomize' kaas oo noo ogolaanaya inaan aragno sida saxda ah barnaamijyadooda furan, iyo kuwa macruufka ah ee xiran sababo la xiriira baahida loo qabo ilaha waxaa laga tirtirayaa barnaamijka furaha (halkii waa la qarinayaa maxaa yeelay haddii aad soo gasho Xaaladda Nabadgelyada dhammaantood way muuqdaan) halkaas).
Waa koronto aad u wanaagsan.
Marnaba ma xiro codsiyada, waa waqti lumis SOO WALBA WAAN SI FAHAN AH U FAHAN KARAA in dadka isticmaala wax ka yar 1GB RAM, ama ka xun, in ka yar 512 MB ay tahay inay sameeyaan maalintooda maalin, maxaa yeelay waxaan ka mid ahaa kuwa iPod Touch 4g ah oo aad u dhiirigelin lahaa haddii aan haysto wax ka badan laba barnaamij oo furan, si aan ugu fiicnaado waxaa lagama maarmaan noqotay in la xiro kuwa aan la isticmaalin, maadaama markii dambe aan ku booday aaladaha 1GB oo RAM ah, ma ogi haddii kuwa leh RAM badhkood ay dhibaatadan ka soo gaadho, laakiin haddii ay sidaas yeelaan, waxaa lagugula talinayaa inaad u xirto sababo dareerayaal ah, ka dib oo dhan, iOS ayaa sameyn doona ilbiriqsi ka hor ama ilbiriqsi ka dib markaad ka fikirto (ama malaha, sida aniga ayey igu dhacday).
Iyadoo 1GB kor loo qaado terminal-ka ayaa tan si xeel-dheer ula tacaali kara, xitaa cayaaraha culus, samee tijaabada waxaadna arki doontaa sida furitaanka ciyaarta uu u xirmayo wax ka badan hal barnaamij.
Ku jawaab kratoz29
Yuu ka hadlayaa wanka, mowduucu waa batteriga, badiyaa waxaad tahay newbie, xagee ku sameysay nuqul / dhaji? OSTIA.
Xaaladdan oo kale, wax walba ma aha madow ama caddaan. Xidhitaanka barnaamijyadu waxay cunaan baytariga iyo xogta, waa xaqiiqo, laakiin mararka qaarkood waxaad xiiseyn kartaa inaad sameyso si aad ugu fiicnaato boosteejooyinka hore.
Ka sokow dijo
Haye maxaad ciyaareysaa
Ku jawaab Ke ase
IOS 9 waxay bixineysaa dhibaatooyin ku saabsan emaylka POP
Mar dambe kuma wareejin kartid barnaamijyadaada Lugood iyaga oo wata iOS 9